Car Blackbox. 4K resolution with wifi and GPS အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Car Blackbox. 4K resolution with wifi and GPS
ရောင်းချသူ: Tin Htut
ကြည့်သူအရေအတွက်: 179 (+1)
Care 4K Resolution Car Dash Cam ကို April လအတွင်းဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ Micro SD Card 32 GB Class 10 တစ်ကဒ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
အာမခံ ၁နှစ်ပေးထားပြီး တစ်နှစ်အတွင်း Factory Fault ကြောင့်ပျက်စီးသွားပါက အသစ်တစ်လုံးပြန်လည်လဲလှယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Care 4K Resolution Camera ရဲ့Specification တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
4K Ultra HD WiFi Car Dash Cam with GPS Tracking
4K Ultra HD Definition
2160P Ultra HD Video
150 degree camera angle
Processor: NOVATEK NT96655 (external 2Gb DDRIII)
LCD display: 2.4" TFT LCD
Wi-Fi : 802.11b/g/n(RT8189)
High definition interface: Support HDMI
Internal memory: support 64G max, TF card (TF card not included)
Dimensions: 70mm x 62mm x 14mm x 30mm
1x Dash Camera
အမည်: Car Blackbox. 4K resolution with wifi and GPS